Ukuncintisana komuntu oyedwa: kuyini, izici nezibonelo | Ezezimali Zomnotho
Ukuncintisana komuntu oyedwa
Encarni Arcoya | | Umnotho jikelele
Ngaphakathi komnotho wezimakethe, singakutshela ngezinhlobo eziningi zamakhono. Ukubazi kungakusiza ukuthola ukuthi imakethe abasebenza kuyo injani, ikakhulukazi uma ufuna ukuqala ibhizinisi kuyo. Futhi, kwezinye izimo, ungazithola usunomncintiswano obizwa ngokuthi yi-monopolistic.
Uyazi ukuthi yini? Iziphi izici onazo? Baziphatha kanjani? Sikhulula ukuncintisana komuntu oyedwa ukuze uyiqonde kangcono.
1 Kuyini ukuncintisana komuntu oyedwa
2 Izici zomncintiswano wokuzimela wedwa
3 Izinzuzo nokungalungi
3.1 Into enhle ngalo mncintiswano
3.2 Okubi komncintiswano wokuzimela wedwa
4 Yiziphi izinkampani ezomncintiswano wokuzimela wedwa
Kuyini ukuncintisana komuntu oyedwa
Ngendlela elula, singakutshela ukuthi ukuncintisana komuntu ngamunye kungenye lapho izinkampani zinabancintisana abaningi; Ngamanye amagama, kunezinkampani eziningi ezithengisa into efanayo, yize kunemikhiqizo ehluke kancane.
Ngamanye amagama, iyi- umncintiswano lapho kukhona abathengisi abaningi, lapho intengo yomkhiqizo ithonywa ngandlela thile kepha abanomehluko omncane kakhulu phakathi kwemikhiqizo yabo, ngendlela yokuthi akukho mehluko omkhulu phakathi kokunye nokunye.
Inani ngokwalo linqunywa yilezo zinguquko ezicashile abanazo, okuyizinto abathengisi abadlala nazo ukuze bagqame emakethe.
Izici zomncintiswano wokuzimela wedwa
Manje njengoba usuqonda kakhudlwana ngokuncintisana komuntu oyedwa, kufanele wazi ukuthi yiziphi izici ezichazayo. Okokuqala, iqiniso lokuthi kunezinkampani eziningi ezimakethe; ngamunye wabo wenza izinqumo zabo, ngokuya ngomkhiqizo, ukukhiqizwa kwawo, ekubekeni intengo, njll. Balawula ngokweqiniso ibhizinisi lakho, kepha abanamthelela emakethe yonke.
Esinye isici iqiniso lokuthi izinkampani zinikela ngemikhiqizo engahambelani. Manje, lezi zingahle zifane, kepha zinezinto ezithile ezihlukanisa zona. Isibonelo, ake ucabange izindawo zokudlela ezimbili. Ezincwadini zabo kunezitsha ezimbili ze-croquettes, kepha uma uzethula, eyodwa nenye izokwenza ngendlela ethile, ngaphezu kokusebenzisa izinto zokusetshenziswa ezahlukahlukene, izindlela zokupheka, njll. Yilokho okwenza umehluko noma ngabe uyimikhiqizo efanayo noma efanayo.
Izinkampani zibeka intengo yemikhiqizo yazo. Futhi bakwenza ngaphezu kwakho konke ukucabanga ngaleyo mininingwane ebenza bahluke komunye umncintiswano wabo.
Ekugcineni, kufanele ukwazi lokho emncintiswaneni wokuzimela wodwa imakethe ayivaliwe; okungukuthi, izinkampani zingangena futhi ziphume ngaphandle kwenkinga noma inhlawulo ngokushiya imakethe zishiya ezinye izinkampani. Ngamanye amagama, azikho izingqinamba zokungena noma zokuphuma, yingakho kunezinkampani eziningi kakhulu.
Yize, kulokho esesikubonile, konke kungalunga emncintiswaneni wokuzimela geqe, iqiniso ukuthi, njengakulo lonke ibhizinisi, kunezinto ezinhle nezimbi. Sikudalula kuwe ngezansi.
Into enhle ngalo mncintiswano
Phakathi kwezinzuzo noma izinzuzo zalolu hlobo lwamakhono kukhona:
Kunokwehluka kwemikhiqizo ethengiswayo. Lezi izici zomkhiqizo ngamunye, ezenza zihluke komunye nomunye, zivumela abathengi ukuthi bakhethe ngokuya ngokuthanda kwabo noma izidingo zabo, ngaphandle kokuhlala nenketho etholakalayo kuphela.
Imakethe inamandla. Ngokungabi nezithiyo, nangokuvumela izinkampani zingene zidlule, ukuqamba, ubuqambi kanye nobuciko kungaqhamuka kulo mkhakha, kwenze izinkampani ziguqule njalo ukunikela ngemikhiqizo efanayo, ehlukile komunye nomunye, kodwa encintisana neyabanye.
Uma kwenzeka kukhona ukulahleka noma imakethe ayikhokhi, ungaphuma. Ngaphandle kwezithiyo, ngaphandle kokukhokha izinhlawulo ... umane unyamalale kulowo makethe.
Okubi komncintiswano wokuzimela wedwa
Manje, naphezu kwakho konke lokhu okungenhla, khumbula ukuthi:
Lapho ufuna lomehluko kumikhiqizo, udinga ukufaka imali kwezinye izinto ezikusiza ukuthi ugqame emncintiswaneni wakho. Isibonelo, ekukhangiseni, ukumaketha ... Lokho kusho uchungechunge lwezindleko, kwesinye isikhathi, ezingaba phezulu kakhulu ukufeza ukuthengisa.
Kunenzuzo encane, ikakhulukazi uma kukhona izimbangi eziningi emakethe. Isibonelo, ake ucabange ukuthi edolobheni, kunendawo yokudlela, kunamashumi amahlanu. Abantu bedolobha bazofana, futhi ngeke badle amahlandla ama-50, ngakho-ke kuzoba nezinkampani ezizuzayo nezinye ezingasizakali.
Awunalo ulwazi ngamanani noma ngemikhiqizo. Ngaphandle kocwaningo lwakho, kepha kungaba yinkinga yokuhlola umncintiswano wakho.
Yiziphi izinkampani ezomncintiswano wokuzimela wedwa
Izibonelo zokuncintisana komuntu oyedwa ziningi ongakhetha kuzo. Eqinisweni, kunemikhakha eminingi lapho singathola khona izinkampani ezikulolu hlobo lomncintiswano.
Esinye sezibonelo ezinjalo Inditex. Usuyazi nje ukuthi yiqembu lezinkampani zemfashini, ezibandakanya izitolo ezaziwa kakhulu njengeZara, Massimo Dutti, Pull & Bear ... Zonke zinikezelwe ngokufanayo, futhi zinikela ngokufanayo, kuphela umahluko lezo ezibeka intengo abanayo.
Ngabe ufuna esinye isibonelo? Kulungile UMcDonald's noBurger King. Kokubili kunikezelwe entweni efanayo, ukudla okusheshayo, kepha kunemikhiqizo ehlukile, noma ngabe iyafana, namanani ahlukile. Lokhu kubenza bangene emncintiswaneni wokuzimela geqe ngoba banikela ngemikhiqizo ehlukanisiwe, ngamanani ahlukile. Futhi lapha singabeka izindawo zokudlela ezengeziwe zokudla ngoba abaningi banikela ngamamenyu afanayo.
Isibonelo sesithathu, ngokujwayelekile, kungaba yizindawo zokudlela. Zonke zinikela ngamamenyu afanayo kakhulu komunye nomunye (noma singahlukanisa ngisho ngezinhlobo ze-gastronomy) futhi amanani azo nawo ayahlukanisa, okusenza sicabange ukuthi sikulolu hlobo lomncintiswano.
Noma esimweni se- amabhisikidi. Uma uya esitolo futhi ubona isigaba salo mkhiqizo, uzothola ukuthi kuningi futhi konke kuhlukile, ngamanani ahlukene. Kepha benza into efanayo: yenza amakhukhi.
Manje njengoba wazi okuthe xaxa ngokuncintisana komuntu oyedwa, nokuthi ubonile izibonelo, ngokuqinisekile akunzima kuwe ukukhomba lolu hlobo lwenkampani empilweni yangempela. Empeleni, kuningi okungaba ngale ndlela. Kuhle noma cha? Kuzovele kuncike enkampanini uqobo kanye nobuhle nobubi babo ngamunye wabo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Ukuncintisana komuntu oyedwa
Cela imali mboleko eyodwa noma yombhangqwana?